Lionel Messi Oo Si Xor Ah Uga Tegi Karaya Barcelona Iyo Qodob Ka Nixiyey Jamaahiirta Oo Laga Helay Heshiiskiisii Barca | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Lionel Messi Oo Si Xor Ah Uga Tegi Karaya Barcelona Iyo Qodob Ka Nixiyey Jamaahiirta Oo Laga Helay Heshiiskiisii Barca
(14-10-2018) Xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa si xor ah uga tegi karaya Barcelona, isla markaana ku biiri doona naadiga uu doonayo.
Barcelona ayaa ka shaqaynaysa sidii ay heshiis cusub uga saxeexi lahayd Messi, hase yeeshee laacibkan ayaa ka war-wareegaya inuu qalinka u qaato, taas oo fasax u siin karaysa inuu si xor ah uga tegi karo sannad iyo badh kaddib.
Qodob aan markii hore warbaahinta lala wadaagin oo ku jiray heshiiskiisii cusbaa ee dhacayay 2021 ayaa hadda bannaanka usoo baxay, waxaana ay taasi yaab ku noqotay jamaahiirta kooxda.
Qodobkan ayaa ogolaanaya in Lionel Messi uu si xor ah uga tegi karayo Barcelona 18 bilood kaddib, taas oo ah ku dhowaad sannad iyo badh.
Sida uu qoray wargeyska Mundo, laacibkan 31 jirka ah ayaa marka la gaadho sannadka 2020-ka, waxa iyadoo aanay Barcelona iibinin uu u wareegi karayaa naadiga uu doono, taas oo bixisay ishaaro ah inuu doonayo inuu waqti u helo koox kale oo uu taariikh nololeedkiisa kusii darsado ka hor inta aanu ciyaaraha ka fadhiisanin.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in qodobkan Messi fasaxaya uu dhigayo inuu ku biiri karo oo kaliya koox aan ka mid ahayn naadiyada waaweyn.
Sidaas oo ay tahay, maamulka sare ee Barcelona ayaa ka shaqaynaya sidii ay ugu qancin lahaayeen inuu kordhiyo qandaraaskiisa iyo in meesha laga saaro qodobka dhibaatada ku ah Blaugrana, waxaanay ugu yaraan doonayaan inuu sii joogo Camp Nou illaa sannadka 2022 ama 2023 markaas oo ay da’diisu noqon doonto 36 jir.
Haddii Lionel Messi uu ku waafaqo reer Barcelona heshiiska ay doonayaan inuu u saxeexo, waxa uu noqon doonaa ciyaartoy hal koox ay taariikhdiisu ku kooban tahay, waxaana suurtogal ah inuu taas iska ilaalinayo.
Qandaraaska uu hadda kula jiro Barcelona ayaa waxa ku xidhan €700 milyan oo lagu burburin karayo, mana jirto koox u badheedhaysa in ciyaartoy 31 jir ah ay lacagta intaas le’eg ka bixiso amaba ku fikirto, hase yeeshee kooxaha Manchester City iyo PSG ayaa lala xidhiidhinayaa inay xiisaynayaan.
Waxa kale oo la sheegay in Lionel Messi uu doonayo dariiqii Xavi Hernandez iyo Andres Iniesta ee ah in marka cimrigooda kubbadeed dhamaadka yahay inay ka ciyaaraan meel kale, iyadoo la warinayo in waddanka Maraykanka aad looga doonayo.